အမေဇုံတွင်အဘယ်ကြောင့်ငှက်ပျောသီးချိတ်ဆွဲမှုပေါင်း ၅၄၂ ခုရှိသနည်း Martech Zone
အမေဇုံတွင်ငှက်ပျောချိတ်တွဲ ၅၄၂ ခုရှိသည်။ စျေးနှုန်းမှာ ၅ ဒသမ ၅၇ ဒေါ်လာမှ ၃၈၄.၂၃ ဖြစ်သည်။ ဈေးအပေါဆုံးသောငှက်ပျောသီးချိတ်များသည်ရိုးရှင်းသည့်ချိတ်များဖြစ်ပြီးသင်၏ ၀ န်ကြီးဌာနအောက်၌တပ်ဆင်ထားသည်။ စျေးအကြီးဆုံးငှက်ပျောသီးကြိုးကတော့ဒီလှပမှုပါ Chabatree ငှက်ပျောကွင်း ၎င်းသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောသစ်သားအရင်းအမြစ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
အလေးအနက်ထား ... ငါသူတို့ကိုတက်ကြည့်ရှုကြ၏။ ငါရလဒ်ရေတွက်, စျေးနှုန်းအားဖြင့်သူတို့ကိုခွဲထားပြီးတော့တစ်တန်လုပ်ခဲ့တယ် ငှက်ပျောသီးကြိုး သုတေသန။
အခုချက်ချင်းပဲခင်ဗျားမေးနေပြီ။ ဒါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာနဲ့ဘာဆက်နွှယ်နေသလဲ။ သင်သွားပြီလား ငှက်ပျောသီး? (ဟုတ်တယ်၊ ငါပြောတာ!)
ဟင့်အင်း၊ ဤသည်မှာကုန်ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုနှင့်ပြောရန်ရိုးရှင်းသောဆောင်းပါးမျှသာဖြစ်သည် ရိပ်မိတန်ဖိုး - သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်မည်သို့ရောင်းရမည်နည်း။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏နောက်ဖြေရှင်းချက်အတွက်သင်၏ရှာဖွေမှုကိုမည်သို့ ဦး စားပေးသင့်သည်ကိုလည်း၎င်းကပြသည်။
ငှက်ပျောတွဲတစ်ခုသည်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတစ်ခုတည်းသာရှိပြီးငှက်ပျောသီးကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူမထိုးနိုင်အောင်ချိတ်ဆွဲထားသည်။ အံ့သြစရာက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ် အသက် ၂၀ ခန့်သာရှိသေးသည်။ ဘေးထွက်မှတ်စု…တီထွင်သူ Bruce Ancona သည်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုထားသည်။ မီးဖိုချောင်တွင်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးပြီးပစ္စည်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်ကိုစဉ်းစားနေသည်။ ငှက်ပျောကွင်းသို့ပြန်သွားပါ
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းငှက်ပျောကွင်းသည် Bruce အားမူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်သည့်အခါ၎င်းသည်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမရှိတော့ပါ။ စျေးကွက်ထဲရှိငှက်ပျောသီးချိတ်ဆွဲသူတိုင်းသည်သင်၏ငှက်ပျောကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်တူသည်။ တနည်းအားဖြင့်, ထို အဘိုး အဆိုပါကြိုးကွင်း၏ပြောင်းလဲသွားတယ်မထားပါဘူး။ လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်ကသင်တို့၏ငှက်ပျောသီးကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ထိုအရာသည်ယနေ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြာရှည်စေသည်။
ဒီတော့လူတွေဘာကြောင့်သူတို့အတွက်မတူတဲ့စျေးနှုန်းတွေပေးကြတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စျေးတစ်ခုချင်းစီမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုရထားလို့ပါ။ လူအချို့ကတန်ပြန်နေရာမယူသောငှက်ပျောသီးချိတ်ကိုအဆင်ပြေချင်သောကြောင့်တန်ဘိုးလျော့နည်းသောမော်ဒယ်အတွက်ပေးရလိမ့်မည်။ အခြားသူများကအခြားအသီးများအတွက်ပန်းကန်ပူးတွဲတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူများက၎င်းတို့အိမ်တွင်လှပသောပုံရှိနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ပစ္စည်းအပေါ် အခြေခံ၍ ငွေပေးချေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အခြားသူများသည်ရေရှည်တည်တံ့သောထုတ်ကုန်များနှင့်သင်၏မီးဖိုချောင်အတွက်အနုပညာအပိုင်းအစတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည့်ဒေသခံလက်မှုပညာရှင်အားထောက်ပံ့ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၃၈၄.၂၃ ပေးရမည်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်စဉ်းစားသောအခါသင်၏ဖောက်သည်အားတန်ဖိုးနည်းသောသို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းသောကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်ပို့ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည် သူတို့သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးထားဘယ်လို။ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်အဘယ်ကြောင့်ပိုမိုစျေးကြီး (သို့မဟုတ်မနည်း) ဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်စေရန်သူတို့ကိုသင်ကြားပေးရန်လိုအပ်သည်။ လူတိုင်းသည်မတူညီသောငှက်ပျောဆွဲကြိုးကိုပြုလုပ်ကြသည်။
ငါ့မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ သူက startup ရဲ့ CEO အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူခံစားခဲ့ရသောစိတ်ဖိစီးမှုသည်မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်နေ့စဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသူ့အားဖိအားပေးသည်၊ ဖောက်သည်များသည်အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုတွန်းအားပေးသည်။ အခြားကုမ္ပဏီများမှစုဆောင်းနေသည့် developer များနှင့်သူသည်အရာအားလုံးကိုအတူတကွဆက်လက်ထားရှိရန်နှင့်သူ၏ဆန်းသစ်သောအမြင်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားစဉ်သူ၏ဝင်ငွေမှာအလွန်ဆိုးရွားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ရန်ပုံငွေများကုန်ဆုံးသွားသောကြောင့်သူ၏လုပ်ငန်းသည်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးလိုအပ်သောစွမ်းရည်များကိုငှားရမ်းရန်မတတ်နိုင်တော့ပါ။
နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုကော်ဖီသောက်ဖို့သူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူအခုဘာလုပ်နေလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ သူကယခုသူသည်မြက်ရိတ်စက်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ သူသည်မြက်ခင်းများကိုမိမိကိုယ်တိုင်ထွင်ခြင်းမှယခုအခါအမှုထမ်းများစွာကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ သူသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်စွာပြုမူခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းခြင်း၊ အိမ်ပြင်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊
သူကအခုကောင်းကောင်းလုပ်နေပြီ၊ သူ့စီးပွားရေးကလည်းတိုးတက်နေပြီ။ စီးပွားရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသိုက်အ ၀ န်း၊ အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုတို့ရှိသော်လည်းမြက်သည် ဆက်၍ ကြီးထွားနေပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်သူသည်သူ၏ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်။ ကြီးထွားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းကြုံခဲ့ရသည့်ပြonနာအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များပေးရုံမျှမကဆန်းသစ်သောအရာမရှိပါ။
စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်ထုတ်ကုန်များနှင့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုရယူရန်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏နေရာတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သူတို့၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ သူတို့ဖောက်သည်များကပိုမိုစျေးကြီးသောစျေးနှုန်းချိုသာသောပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းမှုများအတွက်စွန့်ခွာနေကြစဉ်တွင်၎င်းတို့သည်ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်နောက်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်အာရုံစိုက်နေကြသည်။
ငှက်ပျောသီးချိတ်များများစွာရှိသည်။ အချို့သည်ဗီရိုများမှချိတ်ဆွဲထားစဉ်အချို့သည်သစ်သီးဖလားများချိတ်ဆွဲထားကြပြီးအားလုံးနီးပါးသည်ထူးခြားသောပုံသဏ္haveာန်ရှိသည်။ အားလုံးသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကစျေးကွက်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုစတင်ရောင်းချဖို့စားသုံးသူတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကလုံလောက်နေပြီ။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ခြားနားသည်။ သင်ပြုနိုင်သည့်အခြားပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသည်။ သူတို့ကပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေနှင့်သင်သည်သင်၏ပရိသတ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သင့်လျော်သည်ကိုသင်ကြားရန်သင်ကြားရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့် ၀ ယ်သူများအနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပို့ဆောင်ရန်သင်၏စီးပွားရေးစွမ်းရည်ကို ၀ ယ်သူများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။
လူတွေက Amazon မှာငှက်ပျောသီးချိတ်လို့ရလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုဝယ်လိုက်လားဆိုတာကွာခြားချက်ကငှက်ပျောသီးကလတ်ဆတ်တဲ့၊ ခြားနားချက်သည်ထုတ်ကုန်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဖော်ပြချက်များနှင့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲဒီနေရာကိုမင်းအချိန်ဖြုန်းဖို့လိုတယ် - ထိထိရောက်ရောက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ၊ ဖော်ပြချက်နှင့်ဒီဇိုင်း။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုချင်သောဖောက်သည်များနှင့်သင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးရန်လာမည့်နောက်ကျည်ဆံရသည့်ကျည်ဆံပလက်ဖောင်း (သို့) လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ သို့သော်အမြတ်အစွန်းအများဆုံးတိုးတက်မှုရှိသောနည်းပညာကုမ္ပဏီအချို့သည်လုံးဝတီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၀ ယ်လိုအားကိုမြင်ရုံနှင့်စျေးကွက်ထဲသို့အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်သည်။
သင်စာအုပ်တွေကိုဘယ်နေရာကမဆို ၀ ယ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Amazon ကချွတ်တယ်။ သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုထံမှဖိနပ်ကိုဝယ်နိုင်ပေမယ့် Zappos ချွတ်ခဲ့သည်။ မည်သည့် platform ဖြင့်မဆိုသင် website တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်သည်၊ သို့သော် WordPress မှပိတ်ထားသည်။ ငါဥပမာရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာစာရင်းပြုစုနိုင်ဘူး။
ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာဆန်းသစ်တီထွင်မှုမရှိဘူးလို့ငါမပြောခဲ့ဘူး။ သင်စာအုပ်ရတယ်၊ ဖိနပ်လည်းရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖွင့်တယ်။ ပမာဏ၊ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ကြီးထွားမှုတို့သည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ရောက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှုကိုတီထွင်မှုတွင်အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အရင်းအမြစ်များကိုတတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
သင်သည်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းကိုကြည့်နေစဉ်၊ အဖြေသည်သင်ပိုမိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုခုကိုလုပ်သည်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းချိုသာသောယှဉ်ပြိုင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သို့ပေးသည်ဆိုခြင်းမှာဖြစ်နိုင်သည်။
စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရင်ဆိုင်နေရသောပြhaveနာများရှိပြီးအဖြေတစ်ခုရလိုကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ငှက်ပျောသီးကိုဆွဲထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ရဲ့လာမယ့်သတင်းလွှာအတွက်သူတို့ရဲ့ရေးသားခြင်း၊ ဒီဇိုင်း၊ ပြနာရှိနေတယ်၊ ​​စိတ်ပျက်စရာတွေရှိနေပြီးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုသူတို့သိပြီးသားပါ။
၀ ယ်လိုအားရှိနေပြီးတန်ဖိုးကိုအသိအမှတ်ပြုလျှင်နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်တစ်ခု၊ နောက်တီထွင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားစျေးနှုန်းတစ်ခုမလိုအပ်ပါ။ သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများသည်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပေးသောအဓိကပြproblemနာကိုအာရုံစိုက်ပါ။
လက်လီအရောင်းဆိုင်များသို့၎င်းင်း၏ထုတ်ကုန်များသာဖြူသောတံဆိပ်ကပ်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ယခုလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည်။ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်နောက်ဆက်တွဲလက်လီရောင်းချမှုပြိုလဲခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူအီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ခြင်းစနစ်ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ နည်းပညာအရကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကြောင့်သူတို့သည်ဖြေရှင်းချက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးကုန်သည်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသူများ၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စတင်စကားပြောကြသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဟာစျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုကျဉ်းမြောင်းစေခဲ့တယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခွန်တွက်ချက်ခြင်း၊ AI အင်ဂျင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်သန်းနှင့်ချီသောသူများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း SKUs။ ၎င်းတို့ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ သိန်းချီသောလိုင်စင်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြေရှင်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်၎င်းကိုကမ္ဘာ့အဆင့်မီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လည်အကျိုးအမြတ်မရရှိမီဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း၎င်းတို့အားဒေဝါလီခံရန်သို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းကြာအောင်သွားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ထုတ်ကုန် ၇၅ ခုသာရှိသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုင်တွယ်ရမည့် pittance ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကပထမနှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်အတွက်ပဲအမေရိကန်ကိုရောင်းဖို့ပဲ။ ငွေကျည်ဆံကသူတို့ကိုသတ်တော့မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်မှာသုတေသနနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ ထို့နောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းဖြင့်ရိုးရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ သူတို့၏ထုတ်ကုန်များရောင်းအားကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်မောင်းနှင်ရန်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာပုံမှန် ol 'ငှက်ပျောသီးချိတ်ဆွဲရုံသာလိုအပ်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလေ့လာနေစဉ်တွင်သင့်အားပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်ပိုမိုထိရောက်စေရန်နည်းပညာကိုကူညီပါရန်သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိနာကျင်မှုအချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်သည်စျေးကြီးပြီးဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်မလိုအပ်ပေ။ ၎င်းသည်စာသားများအနေဖြင့်အချက်အလက်များကိုထုတ်ယူခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းစသည့်ဆော့ဝဲလ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးသင့်အားလမ်းပေါ်တွင်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလှသောအလုပ်ချိန်များစွာကိုသက်သာစေသည်။
သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်တူညီသောဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုသင်မည်သို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်နည်း။
ဒီဖြေရှင်းချက်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အမေဇုံတွင်ငှက်ပျောတွဲချိတ်ဆွဲသူ ၅၄၂ ဦး ရှိသည့်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ ၀ ယ်ယူသူများစွာနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ဝယ်သူမြင်သည့်တန်ဖိုးပေါ် မူတည်၍ စျေးနှုန်းများကွဲပြားနိုင်သည်။